1 Beresosɛm 20:1-8
20 Na ɛbae sɛ afe kɔ behyiae,+ na bere a ahene fi kɔ ɔsa no,+ Yoab dii asraafodɔm no anim+ kɔtow hyɛɛ Ammonfo asase so sɛee no, na wɔsan kɔɔ Raba+ kotwaa ho hyiae. Saa bere no, Dawid tenaa Yerusalem, na Yoab ne Raba koe+ na ɔsɛee no. 2 Na Dawid yii Malkam abotiri fii ne ti,+ na ohui sɛ emu duru yɛ sika dwetikɛse biako na aboɔden abo nso wom, na wɔde hyɛɛ Dawid ti. Ɔde kurow no mu asade bebree pa bae.+ 3 Ɔde emu nnipa nso bae, na ɔma wɔde+ nnade a ano yɛ nnam ne akuma paee abo;+ saa na Dawid yɛɛ Ammonfo nkurow nyinaa. Ɛnna Dawid ne dɔm no nyinaa san baa Yerusalem. 4 Eyi akyi no, ɛbae sɛ wɔne Filistifo+ koe wɔ Geser.+ Saa bere no, Husani Sibekai+ bɔɔ Sipai a ofi Refaim+ asefo mu no kum no, na wodii wɔn so. 5 Na wɔsan ne Filistifo no koe, na Yair ba Elhanan+ bɔɔ Gatni Goliat+ nua Lami kum no; ɔno na na ne peaw te sɛ ntamanwemfo nsadua+ no. 6 Wɔsan koe bio wɔ Gat;+ ná ɔbarima tenten kɛse+ bi wɔ hɔ a ne nsateaa ne ne nansoaa yɛ asia asia, ne nyinaa si aduonu anan;+ ɔno nso fi Refaim+ asefo mu. 7 Ná otwa Israel mpoa+ daa, na Dawid nua Simea+ ba Yonatan bɔɔ no kum no. 8 Eyinom yɛ Refaim+ asefo a wɔwoo wɔn wɔ Gat,+ na wɔtotɔe+ Dawid ne ne nkoa nsam.